Infographic: 21 Social Media Statistics nke Onye Ahịa ọ bụla Kwesịrị Knowmara Na 2021 | Martech Zone
O doro anya na mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ọwa ahịa na-abawanye kwa afọ. Platformsfọdụ nyiwe na-ebili, dị ka TikTok, ụfọdụ na-adịkwa ka Facebook, na-eduga na mgbanwe mgbanwe n'àgwà ndị ahịa. Agbanyeghị, kemgbe ọtụtụ afọ ndị mmadụ jiri ụdị eji eme ihe na mgbasa ozi mmekọrịta, yabụ ndị na-ere ahịa kwesịrị ichepụta ụzọ ọhụrụ iji nweta ọganiihu na ọwa a.
Ọ bụ ya mere ilegide anya na usoro ọhụụ ji dị mkpa nye onye ọ bụla na -azụ ahịa. Anyị na Nwachukwu kpebiri ime ka ọrụ a dị mfe ma kwadebe ya ihe ọmụma nwere eziokwu na ọnụ ọgụgụ dị ka ụdị ọdịnaya dị iche iche dị na nyiwe dị iche iche, omume ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị, ntinye aka na ntanetị dị iche iche.
Nchịkọta Ihe Nlekọta Mgbasa Ozi Social:
Ka ọ na-erule 2022, a ga-ewepụta 84% nke ọdịnaya niile na mgbasa ozi mmekọrịta video.
51% nke ụdị ugbua iji vidiyo kama ihe oyiyi na Instagram.
34% nke ụmụ nwoke na 32% nke ụmụ nwanyị na-achọ nkuzi vidiyo.
40% nke ndị ọrụ ga-achọ ịhụkwu ika iyi.
52% nke ndị ọrụ na-ahọrọ ikiri 5-6 nkeji vidiyo dabere na ikpo okwu.
Nchịkọta Ọdịnaya Social Media:
68% nke ndị ọrụ na-achọta ewere ọdịnaya na-agwụ ike ma na-adịghị adọrọ adọrọ.
37% nke ndị ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-agbanye ndepụta na-achọ ozi ọma. 35% nke ndị ọrụ na-achọ ntụrụndụ.
memes karịrị emoji na GIF na-ewu ewu ma ugbu a bụ ngwá ọrụ nkwukọrịta kachasị n'ịntanetị.
Inye ọdịnaya bụ nọmba 1 kpatara ya TikTok.
Ndị na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ na ndị na-ege ntị:
85% nke TikTok ọrụ na-ejikwa Facebook, ma ọ bụ 86% nke Twitter ndị na-ege ntị na-arụkwa ọrụ Instagram.
45% nke ndị ọrụ n'ụwa niile nwere ike ịchọ ụdị na mgbasa ozi mmekọrịta karịa karịa search engines.
87% nke ndị ọrụ na-ekweta na mgbasa ozi mmekọrịta nyeere ha aka ịme a mkpebi ịzụta.
55% nke ndị ọrụ nwere zụrụ ngwongwo ozugbo na ntanetị mgbasa ozi.
Nchịkọta Mgbasa Mgbasa Ọha Mmadụ:
Onye ọ bụla $ 1.00 nọrọ na iwulite mmekọrịta na ndị na-egbu egbu na-alaghachi nkezi nke $ 5.20.
50% nke Twitter ndị ọrụ azụtala ihe mgbe ha sonyere na tweet influencer.
71% nke ndị ọrụ na-eme ịzụta mkpebi dabere na ndị na-atụgharị uche na ntanetị mmekọrịta.
Micro-mmetụta nwere njikọ aka nke 17.96% na TikTok, 3.86% na Instagram, na 1.63% na YouTube, na-ewepụta njikọ aka karịa ndị Mega-influencers nwere ọnụego ntinye nke 4.96% na TikTok, 1.21% na Instagram, na 0.37% na YouTube.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ Social Media Platform:
37% nke ndị ọrụ TikTok nwere ego ezinaụlọ nke $ 100k + kwa afọ.
70% nke ndị nọ n'afọ iri na ụma tụkwasịrị obi YouTubers ha na-eso, karịa ndị ọzọ ama ama.
6 si 10 Ndị ọrụ YouTube yikarịrị ka ịgbaso ndụmọdụ vlogger karịa onye ọbịa TV ma ọ bụ onye na -eme ihe nkiri ọ bụla.
80% nke ndị nwere mmasị na ngwaahịa ịzụta ya mgbe ịlele nyocha na YouTube.
Na 2020, ọnụego aka ahụ na Instagram mụbara site na 6.4%. N'otu oge ahụ, ọnụ ọgụgụ nke post na ndepụta Instagram na-ada: ọtụtụ ụdị gbanwere ịdebanye akụkọ ọzọ.
Nwachukwu bu ihe eji eme ka ndi mmadu nwee ihe omuma ihe omuma nke ndi mmadu nwere ike ichota ihe omuma. Anyị na-enyere aka azụmaahịa nyochaa echiche ndị na-azụ ahịa, chọpụta ihe ngosi dị ire, ma jikwaa aha njirimara.
Tags: 2021CiscoFacebookinstagrammega mmetụtamegainfluencermicro-influencermicroinfluencereziokwu mgbasa ozielekọta mmadụ media infographicọnụ ọgụgụ mgbasa ozi mmekọrịtamgbasa ozi mgbasa oziTikTokTwittervideo blọgụvlogginganyị bụ ndị socailuchechiyoutubeyoutuber
Elena Teselko bụ onye njikwa ọdịnaya na Nwachukwu. O nwere ihe karịrị afọ ise nke ahụmahụ na ahịa na nkwukọrịta, gụnyere ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ IT, na mgbasa ozi.